अब रावलको सफल गन्तव्य ‘ओलीपथ’ नै हो
अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै १० बुँदेको ‘एकतारे’ नबजाएकै ठिक छ। यसको उपादयता सकिएको १० भाइले पनि बुझेकाछन्। रावलका अभिव्यक्ति र हर्कत सहमति कार्यान्वयन नहुँदाको अपजस आफ्नो टाउकोमा नबोक्नको लागि मात्र हो ।
केही दिन अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विवाद समाधानको लागि गरिएको १० बुँदे सहमतिको अर्थ नरहेको धारणा राखे ।
ओलीले कहिल्यै नस्वीकारेको १० बुँदेको समर्थन गर्ने कुरै थिएन। अति भएछ र भने, ‘१० बुँदेको एकतारे बजाएर १० बुँदे १० बुँदे भनिरहन आवश्यक छैन । एक ठाउँ मिलेर एक ठाउँ भएर अगाडि बढौं न खुरुक्क । माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर १० बुँदे गरिएको थियो, के को १० बुँदे हो, हामीले बनाएको पार्टी हो, साथीहरूले बाटो विराउनु भएको थियो होला फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो नि त ।’
कुरा स्पष्ट थियो त्यो पार्टी नफुटोस् भनेर थापेको जाल मात्र थियो । शिकारीले शिकार जालमा पारेपछि चारोको खास अर्थ रहन्न पनि । त्यसमा पनि पार्टी फुटी त हाल्यो अब मन मिलेका मिलेर गयो, सिद्धियो, उनको कुरा स्पष्ट छ।
गत असार २७ मा लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा फसेको नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानको लागि गठित समितिले १० बुँदे सहमति अनुसार समाधान निकालिएको भन्दै कार्यदलका नेता हौसिए ।
कार्यदलका तर्फबाट तत्कालिन नेपाल–खनाल समूहको तर्फका संयोजक तथा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावलको अनुहारमा अनौठो र छटपटी सहितको हाउभाउ देखिन्थ्यो तथापी उनले उक्त सहमतिलाई ऐतिहासिक भने ।
त्यही सहमतिलाई आधार मानेर असन्तुष्ट समूहका १० जल्दाबल्दा नेता पार्टीमा फर्किए, सहमति चित्त नबुझाउने समूहले पार्टी छाड्यो । विद्रोह गरेर नेकपा एकिकृत समाजवादी जन्मियो । एमालेले माधव नेपाल लगायत बिद्रोह गरेर पार्टी खोल्नेलाई लगाउने आरोप छ, ‘माधब नेपाललाई पार्टी फुटाउनु नै थियो, कुनै पनि शर्तमा उनी फर्कनेवाला थिएनन्, बाँकी सबै बहाना हो ।’
पार्टीको विवादको जड एकातिर थियो, समाधानका लागि गरिएको समाधान अर्को तिर थियो, खासमा लामो समय विवादमा फसेको पार्टी समाधान गरौं भन्नका लागि सहमति एउटा समाउने हाँगो मात्रै थियो । निश्कर्ष त त्यही नै थियो, ‘पार्टी भित्रको समस्या वारिपारि भएर होइन पार्टीमै बसेर समाधान गरौं।’
ओलीले किन चाहेनन् १० बुँदेको सहमतिको कार्यान्वयन ?
पहिलो कुरा त ओली जो जो पार्टीमा फर्किए ती १० बुँदेका कारण फर्किएका हुन् भन्ने कुरामा ‘कन्भिन्स’ हुन् सकेका छैनन् । उनको अहिलेसम्मको बुझाइ नै पार्टीमा फर्किएका नेता रिसको आगो सेलाएपछि शान्त बनेर फर्किएका मात्र हुन्, उनीहरू पार्टीको विकल्प भेट्न नसकेर फर्किएका हुन्, यो स्वाभाविक प्रकृया हो ।
ओलीले १० बुँदेलाई देखाएर शान्त बनेर फर्किएका अब बाहिरिन सक्ने संभावना देख्दैनन् । उनलाई स्पष्ट थाहा छ, फलामले आकार दिने तातेको बेलामा मात्र हो । माधव नेपाल लगायत बिद्रोह गर्नेले एउटा आकार लिइसके अब पार्टीका रहेका बकबक गर्ने पार्टी भित्रै हो, त्यसको अर्थ छैन र तिनको कुनै आफैमा शक्ति (पावर) पनि छैन ।
दोस्रो उनलाई लाग्छ पार्टीको विवाद समाधानका लागि गरिएको भनिएको सहमतिले काम गर्न सकेन। उनले भने जस्तै माधव नेपालनै नफर्किए पछि त्यसको अर्थ के रह्यो ? निउँ खोज्ने व्यक्ति बाहिरै रहै, तिनै असन्तुष्टिलाई कारण देखाएर पार्टी फुटाए, अल्पमतमा परेर सत्ता छाड्नु पर्यो के को लागि त्यसको कार्यान्वयनको आवश्यकता ?
तेस्रो कुरा सहमतिले बढी देखेको माओवादी केन्द्र तिर नगएर एमालेमा छिरेका नेता, कार्यकर्तालाई हो । अध्यक्ष ओलीले माओवादीमा नफर्किएका नेता, कार्यकर्तालाई पार्टीको शक्तिको रुपमा स्विकारेकाछन् । पार्टीलाई नाफा पुराउने शक्तिलाई उनले कुनै पनि हालतमा बाहिर राख्ने कुराको कल्पना गर्न सक्दैनन् । किनकी उनलाई थाहा छ, ‘माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई रत्याएर पोस्ने हो, विच्काउने होइन ।’
चौंथो कुरा ओलीले १० बुँदेलाई देखाएर शान्त बनेर फर्किएका अब बाहिरिन सक्ने संभावना देख्दैनन् । उनलाई स्पष्ट थाहा छ, फलामले आकार दिने तातेको बेलामा मात्र हो । माधव नेपाल लगायत बिद्रोह गर्नेले एउटा आकार लिइसके अब पार्टीका रहेका बकबक गर्ने पार्टी भित्रै हो, त्यसको अर्थ छैन र तिनको कुनै आफैमा शक्ति (पावर) पनि छैन ।
पाँचौं १० बुँदेको कार्यान्वयन भनेको १० भाइलाई कुनै न कुनै तरिकाले भाउ (मूल्य) दिनु हो । पार्टी विभाजन गराउनमा उनीहरूको हात छ भन्ने कुरा ओलीले बुझेका छन् । पार्टीमा बिद्रोह गरेका माधव नेपाल आफै पटक पटक भन्दै आएकाछन्, ‘मलाई पार्टी फुटाउन उचाल्ने मलाई माथि चढाएर आफू व्याक भए’ । यो हो पनि, अनि यो अपजस बोकेकालाई ओलीले भाउ दिन्छन् त ?
रावललाई १० बुँदेको साह्रै माया हो त ?
अध्यक्ष ओलीले ‘१० बुँदेको एकतारे बजाएर १० बुँदे १० बुँदे भनिरहन आवश्यक छैन’ भन्दा नेता रावलले स्टाटस लेखे, ‘१० बुँदे सहमति ’एकतारे’ होइन पार्टी एकता बचाएर देशहितको लागि बजाइएको ११ तारे विगुल हो, यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ। सबैले ठण्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थका लागि लाभदायक छ ।’
रावलले भने जस्तै यो सहमति स्वास्थ्यको लागि मात्र लाभदायक देखियो नत्र यसको औचित्य ओलीले भनेजस्तै सकिएको कुरामा शंका छैन । किनकी यसका थिएन पनि केही र सहमतिले गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्न ।
१० बुँदे सहमति मध्येका महत्वपूर्ण बुँदाले संस्थापन इतरको असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेट्यो भन्ने कुरामै प्रश्न उठाएको थियो ।
यसले असन्तुष्ट पक्षलाई झनै कमजोर बनाएको कुरा स्पष्ट छ । दुबै पक्षका कमजोरी थिए भन्ने स्वीकार्दा असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षलाई लगाएका आरोप र संस्थापन पक्षबाट अक्षम्य गल्ती भएको भनिएका गल्ती पनि छोपिएका थिए ।
असन्तुष्ट पक्षले नरुचाएको माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन उल्टो २०७७ चैत मसान्तसम्म सदस्यता लिएका नेतृत्व लिन सक्ने वातावरण बन्यो
यो निर्णयले त्यति ठूलो असर नदेखिए पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूहको बाहुल्यतालाई बल पुराएको थियो । अर्को तिर यसले अब थप हुने केन्द्रीय कमिटीमा समेत यसको प्रभाव देखिने स्पष्ट थियो, अहिले त्यसकै प्रभाव देखिएको छ ।
असन्तुष्ट समूह बाहिर रहँदै भएका निर्णयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएकाछन्, बाहिरका निर्णय गरेको भए असन्तुष्ट समूहको अनुपस्थितिमै भएको भएपनि मान्यता पाउने देखिएको छ ।
यसले पूर्व माओवादीको एमाले भित्रको स्थानलाई सुनिश्चित बनाएको छ । एकतामा मेल नखाने दुबै पक्षका निर्णय बदर गरिने भनिए पनि मेल नखाने भन्ने के हो स्पष्ट थिएन जुन अहिलेसम्म छैन। त्यही अस्पष्टताको फाइदा ओलीले उठाइरहेकाछन्।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशिल हुने क्रममा उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने भनिएपनि त्यही १० बुँदे कार्यान्वयनको कार्यदल समेत फेल खाएको छ ।
उनले ऐतिहासिक भनेको सहमति कार्यान्वयनको दाल गलाउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीसँग जुधेर के संभव होला अब रावलको सफल गन्तव्य ‘ओलीपथ’ नै बाँकी सबै नौंटकी नै हो, नाटकै हो ।
असन्तुष्ट पक्षले नरुचाएको माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन उल्टो २०७७ चैत मसान्तसम्म सदस्यता लिएका नेतृत्व लिन सक्ने वातावरण बन्यो, यसले पार्टीलाई त पक्कै घाटा पुगेको छैन तर असन्तुष्ट समूहले जुन उद्धेश्यले असन्तुष्टि पोखेको थियो त्यसको उपादयता सकिएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको कार्यदलको संयोजक रहेका रावलले कार्यान्वयनको ठोस पहलै नगरेका रावले ओलीले चुप लगाएपछि लुरुक्क राजीनामाको फण्डा बाहिर ल्याए । उनले स्ट्याटस ठोके, ‘एमालेको एकता जोगाउन वार्ता,सहमति,कमिटी बैठक र कार्यदलमा इमान्दारीका साथ भरमग्दुर प्रयास गरें। १० बुंदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएँ तर आज स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षबाट नै १० बुंदे सहमतिको अ‍ौचित्य नरहेको धारणा प्रकट भएपछि फरक मत दर्ज गर्दै कार्यदलबाट राजीनामा दिएको छु।’
रावल अझै बोल्दैछन्, ‘ओलीलाई ठेगान लगाउन पार्टी भित्रै संघर्ष गर्छु ।’ कामरेड रावलको पार्टी भित्रै संघर्ष नगरेर कतै जाने बाटो तत्कालको लागि त्यति चौडा छैन पनि तर उनले ऐतिहासिक भनेको सहमति कार्यान्वयनको दाल गलाउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीसँग जुधेर के संभव होला अब रावलको सफल गन्तव्य ‘ओलीपथ’ नै बाँकी सबै नौंटकी नै हो, नाटकै हो ।
यी पनि पढौं
एमाले विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति, एक भयो एमाले (पत्र सहित)
अर्थतन्त्रमा साहसिक सुधारको आवश्यकता
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि मुख्य ४ कुरा सुधारौं
भुटनाको मोल (अनुभूति)
नेपाल बैंक ८५ वर्ष देखि ‘नेपालीको बैंक’
अविवेकी राजनीति र चेपुवामा परेका नागरिक